Press Release: मिस नेपाल अमेरिका २०१४ का लागि आवेदन खुला - Miss Nepal US
Press Release: मिस नेपाल अमेरिका २०१४ का लागि आवेदन खुला
Home / Uncategorized / Press Release: मिस नेपाल अमेरिका २०१४ का लागि आवेदन खुला
इभेन्ट प्लानेट इन्ट अमेरिकाले सन् २०११ देखि इप्लानेट प्रा.ली. नेपालको सहकार्यमा हरेक वर्ष मिस नेपाल अमेरिका गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यसवर्ष मिस नेपाल अमेरिकाको चौथो संस्करण आगामी अगस्त ९ मा न्युयोर्कको क्वीन्स थियटरमा हुने घोषणा गर्दछौं । साथै प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुला गरिएको पनि सहर्ष जानकारी गराउँछौं । प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने १८ देखि २९ वर्षसम्मका युवतीहरुले १० जुनसम्म आवेदन दिनसक्नेछन् । मिस नेपाल अमेरिकाको आधिकारिक वेभसाइट मिस नेपाल युएस डटकममार्फत इच्छुकहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । विजेतालाई ५ हजार अमेरिकी डलरको छात्रबृत्ति प्रदान गरिने छ । त्यसैगरी फस्ट रनर अप र सेकेण्ड रनर अपले पनि क्रमश ३ र २ हजार डलरको छात्रबृत्ति प्राप्त गर्नेछन् । विजेताले साथमा अन्य उपहारहरु पनि प्राप्त गर्नेछन् । अमेरिकामा रहेका मात्र नभई क्यानडामा रहेका नेपाली युवतीले पनि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनसक्नेछन् ।
युवा शशक्तिकरण र नेपालको प्रवद्धन भन्ने मुल नाराका साथ हुने मिस नेपाल अमेरिका पारदर्शी तरिकाले गरिनेछ । प्रतियोगितामा निर्णायकको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ भने निर्णायकको निर्णय लाई पारदर्शिता अपनाउनका लागि लाइसेन्स प्राप्त सीपीए राखिने छ । यसवर्ष हुने मिस नेपाल अमेरिका प्रतियोगितामा सहभागीहरुले मिस नेपाल न्युयोर्क, मिस नेपाल क्यालिफोर्निया, मिस नेपाल टेक्सास जस्ता टाइटलहरु पनि जित्न सक्नेछन् । साथै विगतका वर्षहरुमा जस्तै मिस ट्यालेन्ट, मिस पपुलर लगायतका टाइटलहरु यस पटक पनि राखिएको छ ।
मिस नेपाल अमेरिका पहिलोपल्ट सन् २०११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो मिस नेपाल अमेरिका सुजिता बस्नेत हुन् । त्यसपछि मिस नेपाल अमेरिकाको दोश्रो संस्करण सन् २०१२ मा वासिंटन डिसीमा सम्पन्न भएको थियो । सन् २०१२ मा आस्था श्रेष्ठ मिस नेपाल अमेरिका भइन् । गत वर्ष न्युयोर्कमा सम्पन्न मिस नेपाल अमेरिकामा बार्तिका राईले ताज पहिरिन सफल भइन् । प्रतियोगितामा विगतका वर्षमा सीएनएन टेलिभिजनकी पूर्व प्रस्तोता किरण क्षेत्री, हलिउडका फिल्मोग्राफी र साउड एडिटर जेम्स सिम्चिक, नेपाली कुटनीतिक नियोगका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, मिस अमेरिका, मिस न्युयोर्क लगायत उपस्थीत भइसकेका छन् । यसवर्ष हुने मिस नेपाल अमेरिकालाई सफल पार्न विगतमा वर्षहरुमा जस्तै अमेरिकामा रहेका सबै क्षेत्र, तह र तप्काका नेपालीको साथ, सहयोग र समर्थन मिल्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी रहेका छौं ।
आयोजक सह आयोजक
अमित शाह सन्तोष सापकोटा
अध्यक्ष, इभेन्ट प्लानेट इन्ट, अमेरिका अध्यक्ष, इप्लानेट प्रा.ली. नेपाल